1 Chii chinonzi domain domain?
2 Όνομα τομέα Mazano
3 Καλύτερη δημιουργία ονομάτων τομέα
3.3 3- Σταθμός Zita
3.6 6- Γεννήτρια ονόματος επιχείρησης Shandisa
6.1 Mishumo: Καταχωρητής τομέα Cloudflare seChita
7.4 1- Πρόσφατες πωλήσεις τομέα Kushandisa
7.5 2- Εργαλεία αποτίμησης τομέα σε απευθείας σύνδεση Kushandisa
Chii chinonzi domain domain?
Apo iwe unoda kutanga webhusaiti, iwe unoda kuva nezita renzvimbo. Asi chii chinonzi heck iri zita rechizinda?
Iwe unoona, kana webhusaiti ikasikwa, inowanzouya nekero yakasiyana inozivikanwa seWerld Όνομα διακομιστές (DNS) iyo inowanzoita seyiyi:
Όνομα τομέα Mazano
Το όνομα τομέα σας είναι η ταυτότητά σας. Ndizvo vanhu vanokuwana iwe, mazita avatengi vanopfuura kune vamwe.
Chengetai zviduku uye zviri nyore kuyeuka (nzvimbo yedu) "Αποκαλύφθηκε το μυστικό μυστικό φιλοξενίας ιστοσελίδων" muenzaniso wakaipa!)
Nyora uye uverenge kakawanda usati watenga (muenzaniso – chenjerera zvikuru kana zita rako rebhizimisi riri) "Dickson Web")
Σχετική λέξη-κλειδί *
* Ongorora: Iwe haudi λέξη-κλειδί muzita rako rezita kuti ugoita zvakanaka paGoogle mazuva ano. Asi iyo pfungwa yakanaka yekuisa zita rako rezita rakatenderedza musimboti wepazita rako sezvo ichapa vashanyi vekutanga nguva yekukurumidza zano rekuti webhusaiti yako iri nezvei.
Καλύτερη δημιουργία ονομάτων τομέα
3- Σταθμός Zita
Zita Station rinobudisa mazita asina kutarisana uye uye asina root key. Kushanyirwa: NameStation.com
6- Γεννήτρια ονόματος επιχείρησης Shandisa
Shopify yeΕπιχείρηση Όνομα Γεννήτρια inokubatsira kuti uite mazita ebhizimisi uye chengetedza zita rekuwanikwa. Tanga nekusarudza izwi rinokosha raunoda kuti nzvimbo yako iise, uye iwe uchawana mazana emazano. Kushanyirwa: Shopify Business Name Generator.
Chirongwa chekunyora uye yekuvandudza mari inodhura zvakanyanya kubva pakuwedzera kwayo (inozivikanwa seTLD). Mumuenzaniso uyu ne NameCheap, ένας τομέας .com inodhura 10,98 $ / gore uye inovandudza pamutengo mumwe chete. Kune rumwe rutivi, nzvimbo ye.store inodhura 4,99 $ / gore kunyoresa asi 48,88 $ / gore kuti uvandudze.
Saka, usati waenderera mberi uye uzviwanire zita idzva rezita rechirongwa, ndine chokwadi kuti pane mubvunzo wakanaka chaizvo waunoda kubvunza. Uye iyo ndeyokuti:
Μιντούρο; Izvo zvinoenderana.
Kunyange zvazvo zvakaoma kupfuurira pasi kunyanya kuti zita rezita rinogona kudhura sei, iwe unogona kutarisira kubhadhara chero kupi zvako pakati pe $ 2 kusvika ku $ 20 pagore, zvichienderana nehotera chero ipi zvayo kana kuti mahwendefa.
Murairo wakanaka wegumbo ndeyekuti itsvaer domain extensions (.global, .design., .Cheap) inogona kunge yakadhura zvishoma kupfuura yakawanda domain extensions domain (.com, .net), sezvo ivo vachangobva kuiswa pamusika .
Zano # 1 – Iwe unogona kuwana yemahara domain kubva kune vamwe vanopa vanopa, kusanganisira InMotion Hosting uye Hostinger. Kukwezva vatengi vatsva, mamwe makambani anotambira anopa mahara mahara nzvimbo kune yavo yekutanga nguva vatengi. Kana uri kuronga webhusaiti kekutanga, unogona kuchengetedza imwe mari nekutambira neaya mawebhusayithi.
Kana nzvimbo yezita raunoda isingawanikwi, edza kuona kana zvakakosha zvakasiyana zvinowanikwa παράθυρο.
Nyoresa domain kana iripo.
Mari inoshandiswa kushandiswa kwebasa rekunyora yega yega inogona kusiyana asi kazhinji, iyo inotangira kubva $ $ – $ 10 pagore.
Iwe unogona kunyoresa domain kana iripo. Asi, unoita sei chaizvo?
Domain RegistrarsPricingWHOIS Απόρρητο
123 Αρ 11,99 £ 11,99,99 £ £ 4,99 / gore
Γκάντι 12,54 € / gore 16,50 € / gore –
Πάμε μπαμπά 12,17 $ / gore 12,17 $ / gore 7,99 $ / gore
κουσιενέραρα 12,99 $ / gore 15,49 $ / gore Ελεύθερος
Zita rakaderera 10,69 $ / gore 12,88 $ / gore Ελεύθερος
Λύσεις δικτύου 34,99 $ / gore 32,99 $ / gore 9,99 $ / gore
Domain Domain registrar nzvimbo dzichakubhadharai mari shoma iyo inowanzosvika pakati pe $ 10 – $ 15 pagore, zvisinei, mazita emadunhu epamusoro pakudzingwa achadhura akawanda pakutenga kokutanga.
Dzimba dzinodhura dzinogona kusvika kusvika kune zviuru zvemadhora asi mushure mokudaro, mari yekuvandudza inonyatsodanwa ($ 10 – $ 15 παγόρα).
Mishumo: Καταχωρητής τομέα Cloudflare seChita
Cloudflare vaudza mazita avo mazita ehurumende kubhadhara mabasa ane zero mari yekubhadhara uye inopa mitengo yakawanda yeTLD dzakadai se .com, .net, .io, κ.λπ. Nhasi, iyo inoshandiswa kune vasati vambotanga Cloudflare uye kuti vanofanira chinya purogiramu.
Zvinokwanisika εδώ kutenga zita rezita rega zvakananga kubva kune webhusaiti inovaka kana kukamba makambani?
Vavaki vemawebsite vanoverengeka vanopa mano ekutenga chirongwa mushure mekunge iwe wakasika nzvimbo panzvimbo yavo.
Vamwe vevakanakisisa vekuvaka webusaiti nhasi, zvakadai Wix ή Weebly, ichakupa rusununguko rwemasikirwo emazita egore kana iwe ukanyorera kumapurogiramu avo egore negore.
Mari yekuvandudza, zvisinei, inogona kusiyana zvichienderana nespamberi pachayo neWix kupa 14,95 $ pagore kuti ivandudze apo Weebly inodhura zvishoma kune 19,95 $ pagore.
Kunyangwe zvingangodaro zvinyorwa zvishoma kana zvichienzanisa nekunyora ruzivo iwe pachako, kubatsirwa kwekutenga zita rekuda mazita kuburikidza newebsite yevashandisi ndeyokuti iwe unogona nyore nyore kubatanidza webhusaiti kuuuna.
Pane Huwandu hwemasimangita emazita escrow mazano anowanikwa, asi apa pane zvishoma kuti iwe unogona kutarisa: Escrow.com, Sedo, uye BuyDomains.
Ndiko kunosvika kuno. Unogona kushandisa mashekeri ekuita kuti uone kuti mutengesi unoenda zvakanaka. Unonyatsoita sei izvozvo; Heino nzira:
Nyora recordha pane imwe nzvimbo yebasa rekutsvaga, uye sarudza maitiro echitengeserano pakati pako nemutengesi, iyo inosanganisira zita rezita (s) uye mutengo wekutengesa.
Iwe Unoda kusimbisa pamwe nekambani yekutsvaga kuti umiridzi wezita rezita redu wakatumirwa kwauri. Shandisa NDIANI ή WHSR Web Host Spy kuti uone kana muridzi wemuzinda wacho avandudzwa kana kwete.
Paunenge uchitsvaga zita rekugara rine mazita, iro rinowanzowanika pamusangano wemarkmarket, vatengesi vega, uye vendesa – iwe uchacherechedza kuti kukosha kwavo kunogona kumira kupi kubva kune madhora mashomanana kusvika kumuswou kwumwomum kwomomana.
Nzvimbo iyo iripo yakatarisa inowana mutengo wayo inogona kusarudzwa nenhamba yezvinhu zvakadai sekureba, mutauro, mamiriro, uye mazita evanhu. Hapana imwe nzira imwe chete iyo inogona kukupa mutengo wakakwana wokubvunza. Kune nzira, zvisinei, kuti ndikupe ballpark kukosha kwezita rezita uye zvinoda zvishoma kutsvakurudza pane yako.
1- Πρόσφατες πωλήσεις τομέα Kushandisa
Το DNJournal δημοσιεύει μια αναφορά αναφοράς τομέα τομέα izvo zvavanogara vachidzokorora uye mairi, vanonyora mazita mazita avo achangobva kutengeswa kubva kune πολλαπλές υπηρεσίες τομέα premium. Paunotarisa kuburikidza, tarisa kune mazita echirongwa chemashoko, urefu, uye zvimwe zvakakosheswa kuti uwane pfungwa yekuti zita rekudoma rakakosha sei.
Έκθεση πωλήσεων τομέα rakabudiswa paDN Journal (Μάιος 2018)
Στιγμιότυπο οθόνης αναφορά πωλήσεων τομέα yaDN Journal.
2- Εργαλεία αποτίμησης τομέα σε απευθείας σύνδεση Kushandisa
Mamwe mashomanana aunogona kutarisa ndeawo Estibot, WebsiteOutlook, uye URL Appraisal.
Aya masayiti anoona kukosha kwemasimusi achishandisa SEO-zvine chokuita nezvinhu zvakadai sekutsvaga, λέξεις-κλειδιά, Alexa rank, mwedzi wekutsvaga, nhamba yekutsvaga, uye mari inoshandiswa pane imwechete.
Zvakare, hapana marongerwo emitengo ekutenga zita rezita uye iwe unogona kutarisira kuti vashandurwe kakawanda. Kana iwe uchida pfungwa yakawanda yezita rematunhu mazita, unogona kuenda kune dzimwe nzvimbo dzakadai Afternic or Tenga Mazita kuti uwane manzwiro emari.
Zvingave zviri kuburikidza newebsite vavakiki kana kuti domain domain registrar, kupiwa zita rezita rinofanira kuva chinhu chokutanga chamunopedza musati maenda kurarama. Kana uchinge watora izvozvo pasi, inguva yekufungisisa achivaka website yako.